बधाई ! नेमारले तोडे महान पेलेको रेकर्ड !
काठमाडौं : ब्राजिलका स्टार फरवार्ड नेइमारले आफ्नो देशका महान् खेलाडी पेलेका नाममा रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड भंग गरेका छन् । कोपा अमेरिका फुटबलमा आज बिहीबार बिहान
ब्राजिलले कोलम्बियाविरुद्ध खेल्नेक्रममा नेइमारले पेलेको सर्वाधिक असिस्टको रेकर्ड भंग गरेका हुन् । आजको खेलमा पनि नेइमारले उच्च प्रदर्शन गरेका थिए ।.ब्राजिलमा जारी प्रतियोगितामा ब्राजिलले पाहुना टोली कोम्बियालाई १००
मिनेटसम्म खेल्दै २–१ को कमब्याक जित निकोलेको थियो । निर्धारित ९० मिनेटको खल १–१ को बराबरी भएपपछि १० मिनेटको इन्जुरी समयमा ब्राजिलले गोल गर्दै खेल जित्यो । ब्राजिलका लागि बराबरी गोल रोवर्टो फर्मिन्होले ७७औं मिनेटमा गरेका थिए ।
त्यसपछि इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेट १००औं मिनेटमा कासेमिरोले हेडिङमार्फत् गोल गरेपछि खेल ब्राजिलले जितेको थियो । कासेमिरोले गरेको हेडिङ गोलमा नेइमारले कर्नर किकमार्फत् असिस्ट गरेका थिए ।
सो गोलमा असिस्टपछि नेइमारले पेलेका नाममा रहेको सर्वाधिक असिस्टको रेकर्ड भंग गरे । पेलेले आफ्नो करिअर दौरान ब्राजिलको राष्ट्रिय टोलीमा असिस्ट गरेका थिए । तर, आज बिहानको १ असिस्टसँगै नेइमारले पेलेको सो रकर्ड भंग गर्दै ४८औं असिस्ट आफ्नो नाममा दर्ता गराएका हुन् ।
यसअघि उनले एक असिस्ट गर्दै पेलेको रेकर्डसँग बराबरी गरेका थिए । आजको खेलपछि उनले रेकर्ड आफ्नो नाममा लेखाए ।
आफ्नो भूमिमा जारी कोपामा ब्राजिल उत्कृष्ट लयमा रहँदा नेइमार पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि उत्कृष्ट लयमै छन् । उनले कोपाका ३ खेल सकिँदा हरेक खेलमा गोल वा असिस्ट गर्दै आएका छन् ।
उनले यी ३ खेलबाट २ गोल र २ असिस्ट गरेका छन्, यो अन्य कुनै पनि खेलाडीको भन्दा राम्रो हो । पेलेले ब्राजिलका लागि करिअर दौरान कूल ९२ खेलबाट ७७ गोल गर्दै ४७ असिस्ट गरेका थिए । नेइमारले हालसम्म ब्राजिलका लागि १०७ खेलबाट ६८ गोल गरिसकेका छन् । यस दौरान उनले ४८ असिस्ट पनि गरेका छन् । नेइमार अब पेलेको सर्वाधिक गोलको रेकर्डबाट मात्रै ९ गोलले पछि छन् ।
२०७८ असार १२, शनिबार ०१:१४ गते0Minutes 445 Views